Ukutshisa ilanga kweze kunye neenzuzo zayo eziphambili | Bezzia
USusana godoy | 19/06/2022 20:00 | Ubuhle
Ngoku ekubeni imozulu entle ilapha, usenokuba uyacinga ukutshiswa lilanga ze. Kuba yenye yezo zenzo zikhuthazwa ngokwandayo kwaye ineenzuzo ezininzi ekufuneka uzithathele ingqalelo. Kakade ke, nanini na sizibeka phantsi kwelanga, simele silumke kakhulu ukuze sinyamekele ulusu lwethu.
Ke ukuba siyenza ze, ke kufuneka uyithathele ingqalelo ngakumbi. Njengoko ezinye iindawo zomzimba zinovakalelo kakhulu kunezinye. Oko kuthethiweyo, kuhleli kuphela ukwazi izibonelelo zokukwazi ukutshisa ilanga njengoko uThixo ekuzise emhlabeni. Mhlawumbi ngeli xesha uya kukhuthazwa ukuba ushiye i-swimsuit ecaleni!
1 Ukutshiswa lilanga uhamba ze kuya konyusa amanqanaba akho evithamin D
2 Iphucula imood
3 Impilo eyongezelelweyo yentliziyo yakho
4 Imvakalelo engakumbi yenkululeko
5 Ikhusela kwisifo seswekile
Ukutshiswa lilanga uhamba ze kuya konyusa amanqanaba akho evithamin D
Nangona kungeyomfuneko ukuyikhulula ngenxa yoko, ewe ukuba ilanga liyakwenza amanqanaba e-vitamin D abengcono. Yenye yezo vitamin ziyimfuneko kumathambo awomeleleyo nasempilweni. Ngoko ke uya kuzigcina kude zonke iintlobo zezifo ezinxulumene nabo. Ngaphandle kokulibala ukuba umbulelo kule vithamini kukho eminye imisebenzi yomzimba enokulawulwa. Ekubeni nayo ineempawu ezichasayo. Ngoko uyazi ukuba yinto ebalulekileyo ebomini bakho nakwimpilo yakho.
Inyaniso yeyokuba kubantu abaninzi ukutshiswa lilanga ze yenye yezona ndlela zintle. Njengoko iyakwandisa i-serotonin kunye nayo, ukuziva unobomi ngakumbi. Ke oku kuya kuhlala kusenza sivakalelwe ngolonwabo esilufaneleyo. Kodwa ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa kwakhona, ngaloo mvakalelo yokuphucula imvakalelo, sinokuthi kwakhona uxinzelelo lushiywe ecaleni. Sihlala sizama ukufumana iindlela zokuzikhulula kuxinzelelo kwaye ngokuqinisekileyo, ukutshisa ilanga kunokuba yenye yezona zilungileyo. Uya kuziva ungcono ngalo lonke ixesha, uphumle ngakumbi kwaye ezo zinto zihlala zimnandi.
Impilo eyongezelelweyo yentliziyo yakho
Ngowona matshini uphambili womzimba wethu kwaye ke, kufuneka sisoloko siwunonophela. Ke, ukutshiswa lilanga kuyilungele intliziyo kuba kuthiwa yehlisa uxinzelelo lwegazi. Sele uyazi ukuba esi sesinye sezizathu eziphambili zezifo zentliziyo ezahlukeneyo. Ngoko ke, xa siyibeka ecaleni, siya kuziva singcono kwaye kwakhona, siya kuzigcina kude zonke iintlobo zeengxaki. Ewe, kwakhona kufuneka sikhankanye ukuba ne-vitamin D eninzi kuba yenye eya kwenza intliziyo yethu ibe nempilo ngakumbi.
Imvakalelo engakumbi yenkululeko
Ngokuqinisekileyo kwiimeko ezininzi, xa usiya elunxwemeni, uyazi Iimpahla zokudada. Ngamanye amaxesha iyaqina, ngamanye amaxesha iyehla kwaye inokuhlala inzima kancinci imini yethu. Ewe, enye inzuzo yokutshisa ilanga ze kukuba awuyi kuba neengxaki ezifanayo. Inkululeko iya kuba lolona khetho lwakho lungcono lokuba ukwazi ukonwabela usuku usenza eyona nto uyithanda kakhulu kwaye ufumane ubomi obuninzi, enkosi kwezinye izibonelelo ebesigqabaza ngazo.
Ikhusela kwisifo seswekile
Ubusazi ukuba ukutshiswa lilanga kukwalungile ekuthinteleni isifo seswekile? Ewe, kunjalo kwaye kufuneka uyithathele ingqalelo. Kakade ke, oku kukwanxulumene ngandlel’ ithile ne-vitamin D, ebonakala inamandla phantse yonke into enxulumene nelanga. Yiba nokuba kunjalo, ukuba namanqanaba amahle ale vithamin kunye nokutshiswa lilanga kunxulumene kwaye kusinceda nakwezinye iinkalo ezininzi zempilo yethu.
Ke, ukuba ufuna ukuzama ukutshisa ilanga uhamba ze, ngokuqinisekileyo uya kufumana ulwandle olukunika inketho kwaye unokuqalisa ukuziva zonke iingenelo ezifana nezi besikhe saphawula ngazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Ukutshisa ilanga kweze kunye neenzuzo zayo eziphambili